Bisikileta an'habakabaka ara-barotra, mpanazatra hazo fijaliana Elliptical, bisikileta fanatanjahan-tena- Bestgym
Ny masinina elliptika dia mampiasa ny fitsipika fa rehefa mandeha miadana, haingana, na mihazakazaka ny vatan'olombelona dia mitovy amin'ny ellipse ny lalan'ny tongotra. Amin'ny alàlan'ny mekanisma sasany, ny pedal dia mivezivezy amin'ny làlan'ny elliptical, ary ny làlana elliptical noforonin'ny pedal dia mitarika ny tongotr'ilay mpampiasa Ny fampiharana ny masinina elliptical dia mahatonga ny hetsika fitaizan'ilay milina elliptical mifanindry amin'ny dingana voajanaharin'ilay olona. Mandritra ny fampihetseham-batana iray manontolo, ny tongotra dia tsy mamela tanteraka ny pedal, izay misy fiatraikany lehibe eo amin'ny lohalika, ary afaka mampiasa ny hozatra ambony sy ambany amin'ny fotoana iray. , Heverina ho fahombiazan'ny fitaovana fanatanjahan-tena aerobika tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny bai bisikileta magnetika dia ampiasaina indrindra mba hanomezana ny olombelona fitaovam-pitaterana haingana 1653 izay tsy voafehin'ny fanoherana ny lanjan'ny vatana dao, manana coefisyfera ambany amin'ny 4102, maivana sy azo antoka ary tsy misy fandotoana angovo sy herinaratra. Anisan'izany ny fivorian'ny bisikileta sy ny mekanisma mitondra fiara. Rehefa mitondra fiara dia tsy mila manidina fotsiny ny pedaly havia sy havanana ny olona. Ny fotodrafitrasa lehibe manerantany amin'ny flywheel dia manosika ny atiny manerantany faharoa hamily ny herin'ny maherifo. Rehefa pedal haingana ireo pedal havia sy havanana dia miorina amin'ny andriamby faharoa Ny kodiarana aoriana amin'ny vodin-tany dia mihodina amin'ny hafainganam-pandeha avo. Rehefa mijanona ny pedal, eo ambanin'ny hetsiky ny hery sahan'andriamby, dia afaka mandeha lavitra be avy hatrany ny bisikileta.
China Factory Price Fitness recumbent mipetraka e ...
Milina fanatanjahan-tena ao an-trano mihetsika Foldin ...
Fivarotana mafana vidiny tsara indrindra Fitness Fitness Seza R ...